छुवाछुत सहितको गणतन्त्र नेपाल र कालिकोटका अपहेलित दलितहरु	Postpati – News For All
कर्ण बिश्वक्रर्मा २०७६ बैशाख २२,आईतवार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : १० मिनेट
राणाशाानकालीन समयको बि.स. १९९० को मुलुकी ऐन, पंचायति समय बि.स. २०२० को मुलुकी ऐनमा जातीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने कुरा थोरै उल्लेख गरिएपनि त्यसको संरक्षण नै गरियो । त्यस पछिको बि.स २०४७ सालको संविधान हुदै २०६३ सालको सालको अन्तिम संविधान र हाल लागु २०७२ सालको गणतान्त्रीक संबिधान घोषणासम्म आउदा पनि जातीय विभेद अझै हटेको छैन ।
संविधान र कानुनमा छुवाछुत गर्नु सामाजिक अपराध हो भनि घोषण गरिए पनि छुवाछुत र दलित माथिको उत्पीडन तथा भेदभाव हटेको छैन ।
कालिकोट जिल्लाको भौगोलिक अवस्था गर्दा कूल क्षेत्रफल १७४१ वर्ग कि.मी. अर्थात १७८०३० हेक्टर रहेको छ । यो जिल्लाको पूर्वमा जुम्ला, पश्चिममा अछाम, उत्तरमा वाजुरा र मुगू तथा दक्षिणमा दैलेख र जाजरकोट जिल्ला पर्दछन् ।
कालिकोट जिल्ला नेपालको कान्छो जिल्लाको रुपमा परिचित छ ।
पंचायतकालिन समयमा २०३२ सालमा तिब्रीकोट जिल्लाबाट अलग गरी कालिकोट जिल्ला नामकरण गरिएको हो । यो जिल्ला पहिलेको संरचना अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कर्णाली अञ्चलमा पर्दछ भने नेपालको सविधान २०७२ अनुसार ६ नम्बर कर्णाली प्रदेश भित्र अवस्थित छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत बिरेन्द्रनगर बाट २३२ कि.मि. को दुरीमा उत्तर तिर अवस्थीत छ ।
यस जिल्लाका खाद्यान्न उत्पादनको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने वालीहरुमा खास गरी धान, मकै, कोदो, गँहु, जौं आदि पर्दछन् ।
कालिकोट जिल्लाको सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवस्थालाई केलाउदा जिल्लामा विभिन्न प्रकारका सामाजिक रितिरिवाज चालचलन र सँस्कृतिहरु छन । ती सबै संस्कार र संस्कृति, बोली भाषा धेरै तल माथी भएपनि मुलभूत रुपमा एउटै छन । सबै जातिहरुको संस्कार संस्कृतिमा धेरै भिन्नता छैन ।
उच्च जातीको रुपमा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी जातीको बसोबास बढी छ भने तल्लो जातिको रुपमा कामी, बि.क., सुनार, लुवार, दमाई, परियार आदी जातीको बसोबास छ ।
त्यतिमात्रै होईन उच्च भनिने जातीको लागी दलितको राम्रो केटी चल्ने तर पानि नचल्ने जस्ता गलत संस्कारहरु छन । घर बनाउने दलित तर घर बनाईसकेको अर्को दिनबाट घर भित्र गएमा छुई मान्ने प्रकृति अहिले पनि बाकी छ ।
यस्ता गलत सामाजिक भेदभाव विरुद्ध कानुनि प्रावधान बलियो बनाईसकेको भएपनि यस जिल्लामा लागु हुुन सकेको छैन । फेरी पनि दलित माथीको अन्याय अत्याचार, छुवाछुत, भेदभाव र गलत संस्कृतिका विरुद्ध जनचेतना फैलाउन अनिवार्य छ ।
जिल्लाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पर्यटकिय स्थल, जडीबुटी, तथा फलफुल खेतिको सम्भाब्यताको हिसावले बलियो देखिएपनि सहयोग हुन सकेको छैन । नेपालकै अग्लो पचालझरना, तिलागुफा, चुलि, पुग, मालिका जस्ता पर्यटकिय स्थलहरु छन । जलस्रोतको हिसावले कर्णाली नदी छ । जडीबुटीको हिसावले महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु पाईने बनजंगल छ ।
तर त्यसको सदुपयोग हुन नसकेकाले हाल आर्थिक आयस्रोतको अवस्था कमजोर छ ।
दलित समुदायले आफु दलित भएकोमा हिनताबोध होईन गर्भ गर्न जरुरी छ । आफुमाथीको अन्याय, अत्याचार र विभेदको लाहाचारी नभई शशक्त विरोध गर्नु पर्छ आफ्नो अधिकारको खोजिका लागी आफै शशक्त हुनुपर्छ । साँच्चै दलित समुदायले समेत ध्यान दिनु पर्ने बिषय के छ भने दलित–दलित भित्रको विभेद अन्त्य गर्न जरुरी छ । कामी बि.कि. ले परियार, सार्कीको हातको पानी पिउन अस्वीकार गर्ने, छोरी बहिनी चलाउन नपाईने जस्ता जातीय विभेदहरु पनि हटाउनु पहिलो आवश्यकता छ ।
त्यस्तै आफ्नो उत्पीडनका विरुद्ध सबै दलित समुदायहरुको एकता जरुरी छ । सबैको एकताबाट आफ्नो अधिकार खोजि गर्नुपर्छ ।